Kuuriyada Waqooyi Oo Tijaabisay Hub Casri Ah + Waa Noocma Hubku |
Kuuriyada Waqooyi Oo Tijaabisay Hub Casri Ah + Waa Noocma Hubku
London (GNN):- Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim John-un ayaa kormeeray tijaabada hub cusub oo casri ah, sida ay ku warrantay warbaahin ay dawladdu leedahay
Wakaaladda wararka ee KCNA ayaanse faahfaahin ka bixinin nooca hubkaas, waxayse sheegtay in hawshan wakhti hore laga shaqeeyay.
Waase kormeerkii u horreeyay ee lagu sameeyo hub hub la tijaabinayo muddo sannad ah.
Shir ay bishii Juunyo yeesheen Kim iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayay ku heshiiyeen in gacanka Kuuriya laga cirib tiro hubka Nukliyeerka ah, balse lama shaacinin faahfaahinta sida hawshaad loo qabanayo.
Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi faahfaahin kama aysan bixinin nooca hubkan, balse waxay timidwax yar uun ka dib markii sawirro satellite-ka laga helay ay muujiyeen in ay jiraan goobo gantaallo oo dalkaas ku yaalla.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay darsayso waxa hubkaasi ay noqon karaan, balse dad badan ayaa farta ku fiiqay in Kuuriyda Waqooyi aysan ka go’nayn horumarinta hubka iyo xiritaanka goobaheeda gantaallada.